Korea Atsimo : Voampanga Ho ‘Mpomba ny Tavaratra’ Ny Pretra Katolika iray Nitsikera Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2013 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, 한국어, English
Nanjary fitaovam-piadiana ho an'ny governemanta ny fanadihadiana azy nataon'ireo mpampanoa lalàna. Nosokajian'ny Piraiminisitra Koreana Tatsimo ho toy ny “fandravana ny firenena sy fanomezana vahana ny fahavalo” izany fanehoankevitr'i Park izany ary nolazain'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenana hoe “fahavalom-panjakana” izy. Hafahafa ihany izany satria ao amin'io lahateny io ihany no ilazan'ny Park fa “leo tanteraka ny fomba fiteny ‘miandany amin'ny Avaratra’ izay tian'ny fitondrana mpiaro nentin-drazana ampiasaina sy araraotina izy mba hanafoanana ireo tsikera rehefa nolazaina ry zareo fa mpanara-dia ny mpomba an'i Korea Avaratra.”
Tamin'ny fiafaran'ny fahavaratra teo dia nampiaka-peo ny mpitarika Katolika any Korea Atsimo, tarihin'ny Fikambanan'ny pretra Katolika ho an'ny Fahamarinana, noho ny fitsabahana mahazatra ataon'ny governemanta, indrindra noho ny fandraisany ireo Lamesa sy fiaretan-tory an-dabozia ho hetsi-panoherana. Manana ny tantarany io vondrona io raha ny fanoherana ny jadon'ny mompera Filoha Park tamin'ny 1970; izy ireo ihany koa no namoha indray ny fampijaliana sy ny fahafatesan'i Park Jong-Chul, izay nitarika ny Hetsibahoaka tamin'ny Jona 1987.
Fantatra tamin'ny vaovao mafàna farany momba ny trangan'ny fampielezankevitra fa bitsika maherin'ny 24,2 tapitrisa no nosoratan'ny sampan-draharaham-pitsikilovana sy ny sampana ho an'ny ady amin'ny aterineto ao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana, mba hanalàna baraka ireo kandidàn'ny mpanohitra sy hanandratana ny filoha am-perin'asa Park Geun-hye. Arakaraky ny mampirongatra ny hetsi-panoherana no itenenan'ny filoha fa ‘tsy mandefitra amin'ny hetsika rehetra hampisara-bazana ny vahoaka sy handravana ny firaisam-pirenena izy’.
Nobitsihinà mpanao gazety malaza, @mediamongu ny sarin'ny lamesa manokana nokarakarain'ny CPAJ ary notarihin'i Mompera Park tamin'ny 22 Novambra. Manodidina ny 400 ireo pretra sy mpino katolika voalaza fa tonga nanatrika io hetsi-panoherana io :
Nodoran-dry zareo [vondron'ny mpandala ny nenti-paharazana] ny sarin'i Lee Seok-ki taorian'ny fahavoazany. Izao dia lazainy fa mpomba ny Tavaratra ny CPAJ sy nandoro ny sarin'izy ireo. Tena mandreraka be izany- ohatra ny mijery fanaovan'ny mpamosavy sorona. Ity karazana fampihorohoroana ataon'ireto jiolahimboto antitra ireto ity- tsy misy zava-baovao amin'izany rehetra izany.